26 June waa markii ay gumaysiga ka xuroobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliya. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
26 June waa markii ay gumaysiga ka xuroobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliya. Maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka June waxay ku beeggan tahay maalintii ay xorriyada qaateen gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo ay kasoo waregatay 52-sano waxaana markii ugu horreysay calanka Soomaaliyeed laga Si arintaasi xog fara badan looga helo ayaa waxaan xiriir la sameenay aqoonyahanada soomaaliyeed si ay uga sheekeyaan wadadii loo soo maray xoriyada iyo dhiigii u soo daatay
C/qaadir Macalin Max'ed oo ka mid ah aqoonyananada soomaalya ahna Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in 26 june ay tahay maalin taariiqi ah oo aan la iloobi Karin islamarkaan halgan fara badan loo maray.
Sanadka markuu ahaa 26-ka June 1960-kii ayaa gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya waxay ka xorroobeen gumeysigii Ingiriiska.
Maanta oo kale ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay maalin weyn, iyadoo ay u suuragashay shacabka oo isku duubnaan muujinaya in ay iska dul qaadaan dhibaatadii gumeystaha Ingiriiska.
Xuska munaasabadda 26-ka June oo ka soo wareegatay 52 sano markii ay xornnimada qaateen gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa meel kasta oo ay umada soomaaliyeed jookto waxaa laga dareemaya farxad iyo damaashaad iyodoo lagu guda jiro todobaadkii xoriyada